Argagixiye ku dhashay Switzerland oo lagu Maxkamadeenayo dalka Ciraaq | SomaliSwiss Wararka Somaliswiss
Home / Uncategorized / Argagixiye ku dhashay Switzerland oo lagu Maxkamadeenayo dalka Ciraaq
Sida lagu baahiyay barnaamijka 10vor10 ee ka baxa Tvga SRF Ciidamada Amaanka dalka Ciraaq ayaa qabtay ruux dhalinyara ah oo da`diisi tahay 24 jir muwaadin Turki ah balse u ku dhashay dalkaan Switzerland kaas oo ka barbar dagaalamay Argagixisada Daacis ama ISIS.
Ninkaan oo Magaciisa Xarakiga ah uu yahay Cubeyda ayaa wajahaya xukun toogasho sida laga soo xigtay Haayadaha Amaanka dalka Ciraaq hadii Eedeeymihiisa loo halo Cadeeymo buuxa.
Cubeeyda oo la sheegay in uu ku dhashay Magaalada Arbon ee Gobolka Tugau ee Waqooyiga Bari ee dalkaan Switzerland ayaa la sheegay in sidoo kale uu leeyahay Magac kale oo Turki ah balse uu Kooxda Argagixisada ah u yaqaanaan Cubeyda.
Amar Maxkamadeed oo hore uga soo baxay dalkaan Switzerlabd sanadkii 2015 ayaa looga Mamnuucay eedeeysanaha in uu soo galo dalkaan Switzerland.
Afhayeen u hadashay Booliska Switzerland Frau Catherine Maret waxa ay sheegtayin ninkaan argagixisada ku eedeeysan in laga mamnuucay ku soo laabashada dalkaan Switzerland sababa la xiriira baqasho laga qabo Amniga gudaha.
Eedeysanaha ayaa sheegay in uu Bartay Walxaha qarxa iyo dhamaan hubka Nuucyadiisa kala duwan intii uu ku sugnaa dalka Syria ka diba uu u wareegay dalka Ciraaq si uu uga barbar dagaalmo Argagixisada ISIS.
Wararku waxay ay intaas ku darayaan in ruuxaan uu heeystay daganaashada dalkaan ee loo yaqaan C balse wali uusan qaadan dhalshada Switzerland sidaad darteed Wasaarada Arrimaha dibadu waxa kaalmo ah kama geeysan Kiiskiisa la xiriira Eedeeyntiisa Aragagixiso ee hada ka Furan Dalka Ciraaq.